Manni Lubummaa Oromiyaa lallaba afaan dhalootaan murtaa’e morme - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni Lubummaa Oromiyaa lallaba afaan dhalootaan murtaa’e morme
Manni Lubummaa Oromiyaa lallaba afaan dhalootaan murtaa’e morme
Sinoodosiin Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo hundeeffama Mana Lubummaa Oromiyaa mormee ture
(bbc)—Lallabni amantaa Ortodoksii afaan dhalootaan akka lallabamu murtaa’uu yaa’iin Sinodoosii Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa beeksise.
Murteen kuni kan dhagahame yaa’ii Sinoodosiin A.L.I Onkololeessa 11 – 24/2012 taasisen booda akka ta’e gabaafameera.
Haa ta’u malee, murtee kana akka mormu koreen Sinoodosiin beekkamtii dhowwate, Manni Lubummaa Oromiyaa, beeksiseera.
”Guutummaan guututti ni mormina,” jechuun ogeessii seeraa fi barsiisaaan Mana Amantii Ortodoksii Itoophiyaa Hayilamikaa’eel Taaddasaan deebiin eegan akka hin kennamne dubbatan.
Qulqulluu Sinoodosii irratti ummanni dhiibbaa akka taasisu gaafatame
”Lallabni afaan dhalootaan akka dhiyaatu gochuun gonkumaa gaaffii dhiyeessineef deebii hin ta’u,” jedhanii BBC’tti dubbataniiru.
Gaaffiin dhiyeessaan caasaan of danda’e Naannoo Oromiyaatti yoo hundaa’e qofa akka furamuu danda’u ibsan.
”Naannoon Oromiyaa caasaa of danda’e itti waamamnisaa Sinodoosiif ta’e hin qabu taanaan tajaajilli Afaan Oromoon laatamu lafa hin qabatu” jechuun himu.
Sinodosiin ibsa midiyaaleef har’a kenneerratti manneen barnootaa fi wirtuuleen leenjii lallabaa afaan garaa garaan akka hundaa’an fi bajanni dhaabbiin akka ramadamuuf murtaa’uu isaa ibseera.
Sindoosiin murtee kana murteessuun mataasaatti bu’aa qabsoo keenyaatii kan jedhan barsiisaa Hayilamikaa’el, garuu deebii qubsaa akka hin taane dubbatu.
Mana Lubummaa Oromiyaa hundeessuun maaliif barbaachise?
Gaaffii dhiyeessine muraasa deebisuun gaaffii mana lubummaa Oromiyaa ‘irraa utaaluufi’ jedhanii dubbatan.
”Afaan dhalootaan duraaniis yaaliin tureera. Seera mana amantichaa keeyyata shanirrattis afaan tajaajila Mana Kiristaanaa afaan naannichaa ta’uun ifatti tumameera, wanti haaraan hin jiru. Kitaabni Qiddaasee Afaan Oromoo akka ta’u ibsameera,” jechuun ibsan.
Tajaajila lallaba wangeelaa qofaadha afaan dhaloota kan jedhamaa jiru malee qabatamaan tajaajila hundaa mitii jechuun dubbatu.
Tajaajilli baay’een kennamu qiddaasee, kidaanii, kan cuuphaaf raawwataman, kan namni gaafa kiristaanummaa fudhatu kanneen hundi afaan Oromoon akka ta’u ifatti waanti murtaa’ee hin jiruu,” jedhan.
”Gaaffii nuti gaafanne haqanqalanii hambisuufi malee nuti gaaffii caasaa gaafanne jedhan. Caasaa Mana Lubummaa Oromiyaa itti waamamni isaa kan Sinodoosiif ta’e gaafannee, ” jechuun himan.
Qulqulluun Sinoodosii koree Mana Lubummaa Oromiyaa seeraan gaafachuufi jedhe
‘Deebii malee fooyya’iinsa hin barbaannu’
Caasaa haaraa fedhii ummataa guutuu barbaanna malee bakkuma jirutti foyya’iinsa akka dhufu mitii kan nuti barbaannuu jechuun dubbatu murtiin Sinodosii jijjirama bu’ura akka hin fidne kaasuudhaan.
Caasaan jiraachuu dhiifnaan jijjiramni eegamu galma hin gahu jedhanii akka yaadan dubbatan.
Duraanis namoonni yaalani jiru jechuun sababa caasaatiin otoo hin milkaa’iin akka hafe dubbatan.
”Caasaaan amma jiru matta’aa firaaf aanteen waliigalatti xaxameefi rakkoo bulchiinsaa qabu. Caasaa kanarratti jijjiirama bu’uura otoo hin fidiin afaan dhaloota qofaan dubbachuun rakkoo gama tajaajilaan Afaan Oromoon jiru ni furaa jennee hin amannu.”
Oromoon jireenya akkanaa jiraachaa jiraa???
I’m grateful to Jawar Mohammed for doing an interview with me ..